Akenzanga cala uDhlomo - Mkhize | isiZulu
Akenzanga cala uDhlomo - Mkhize
UDhlomo akaphefumuli ngeyesikhundla
Kuvikelwe isinyathelo sikaDhlomo
UDhlomo uthi akajiki kwakushilo
Durban - UNdunakulu waKwaZulu-Natal uZweli Mkhize usekubeke kwacaca ukuthi uNgqongqoshe woMnyango wezeMpilo uS'bongiseni Dhlomo, akenzanga lutho okungukwephula umthetho, ngesikhathi esebenzisa indiza yezosiso oluphuthumayo, kubika iThe Mercury.
Amaqembu aphikisayo aphakamise ukuthi uDhlomo ashiye isikhundla sakhe ngemuva kokuvela kokuthi wasebenzisa indiza, eyadingakala sekwenzeke ingozi, kumele iphuthumise umfana owayelimele.
U-Asheen Singh, 15, kwaba nguye kuphela osindayo esehlakalweni sengozi eyavelela umndeni wakhe.
Ngesikhathi kwenzeka ingozi, kwadingeka ukuthi umfana aphuthunyiswe esibhedlela yindiza, nokho lokho kwengenzeka njengoba indiza yabe isetshenziswa nguDhlomo, kuthiwa uphuthuma ukuyoxazulula ingxabano eyabe iqhubeka phakathi kukadokotela nentombazane eneminyaka engu-16 ubudala.
Uphenyo oluvezwe yiphephandaba iSunday Tribune, luthi uDhlomo wabe ehambele umngcwabo kaZacharia “Cliff” Zungu, ongumyeni wemenenja yasesibhesdlela kwaHlabisa, uDawn Zungu.